Umtsalane we-Aquarium, yenzelwe ntoni kwaye yeyiphi eyona ilungileyo? | Ngeentlanzi
Sele sitsho kwizihlandlo ezininzi ukuba eyona inzima, kunye neyona ibaluleke kakhulu, xa une-aquarium gcina indawo ezinzileyo. Oko kuthetha ukuba kufuneka igcinwe ngaphakathi kwinqanaba lobushushu, ngoncedo lwefeni ye-aquarium, kunye namanzi acocekileyo, kwimeko ukuze iintlanzi zikwazi ukuphila.
Namhlanje siza kugxila kweyokuqala, indlela yokugcina ubushushu obuzinzileyo kwi-aquarium, into enzima ngakumbi kwiinyanga ezishushu ezinje ngezi. Ke ngoko, siza kubona iintlobo ezahlukeneyo ze-aquarium fan eza kusivumela ukuba sigcine ubushushu be-aquarium buzinzile, kunye neengcebiso zokuyikhetha kunye neyona nto intle, phakathi kwabanye. Hi ndlela leyi, ukujonga ubushushu ngokuthembekileyo, sicebisa eli nqaku malunga neyona ilungileyo Ithemometha ye-aquarium.
1 Eyona Fans igqibeleleyo yeAquarium
2 Iindidi zabalandeli be-aquarium
2.1 Nge thermostat
2.4 Umlandeli kaNano
3 Olona hlobo lubalaseleyo lwabalandeli be-aquarium
4 Yintoni ifeni ye-aquarium?
5 Uyikhetha njani ifeni ye-aquarium
5.1 Ubungakanani be-Aquarium
5.2 Inkqubo yoLungiso
6 Uyisebenzisa njani ifeni ye-aquarium ngokuchanekileyo
7 Umtsalane we-aquarium okanye upholile? Zithini izibonelelo kunye neyantlukwano nganye nganye?
8 Apho ungathenga khona iifeni ze-aquarium ezingabizi kakhulu
Eyona Fans igqibeleleyo yeAquarium
I-Aquarius ye-LONDAFISH ...
Isixhobo somoya ...
Kupholile emanzini, ...
Iindidi zabalandeli be-aquarium
Ngokuqinisekileyo, bonke abalandeli benza ngokufanayo, kodwa njengesiqhelo zininzi iimveliso ezinokwenza umohluko kwaye zilungelelanise ngokupheleleyo wena neentlanzi zakho okanye, ukoyikeka, ube yingqushu engasisebenzisi kangako kuthi. Kungenxa yoko le nto siqulunqe ezona ntlobo zixhaphakileyo zabalandeli be-aquarium ukukunceda ufumane isixhobo esifanelekileyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo enye yezona zinto ziluncedo kakhulu, ukuba ayilona iluncedo kakhulu, ngakumbi ukuba awunakucacisa okanye ukuba ungumqali kulo mbandela. Abalandeli beThermostat banomsebenzi ozenzekelayo ocima ngokuzenzekelayo xa i-aquarium ifikelela kubushushu obufunwayo, kwaye zenziwe zasebenza ukuba obu bushushu budlulisiwe.
Ezinye ze-thermostats sisixhobo ekufuneka usithengile ukongeza kwifeni. Ziyilelwe ukuba zidityaniswe koku, kwaye zibe neqondo lobushushu elingena emanzini ukuya kuthi, ewe, lilinganise iqondo lobushushu elikulo. Ezona mveliso ziphambili zezinto zasemanzini ezinje nge-JBL, zicebisa ukuba usebenzise i-thermostat yakho kuphela kunye nabalandeli bohlobo lwayo ukunqanda ukungangqinelani okunokubakho ngesixhobo, umbane ...
Umlandeli othuleyo Kubalulekile ukuba une-aquarium ekufuphi (umzekelo, eofisini) kwaye awufuni kuphambana ngengxolo. Ngamanye amaxesha kunzima ukufumana, okanye abazalisekisi ngokuthe ngqo oko bakuthembisayo, ke kwezi meko kuyacetyiswa kakhulu ukujonga izimvo zemveliso kwi-intanethi.
Olunye ukhetho, ngokuthe cwaka kunabalandeli, kukupholisa amanzi. (esiza kuthetha ngayo kamva), ezenza ngokufanayo, kodwa ngengxolo encinci.
Umatshini wokuphefumla oneprojekhthi kubalulekile ukuba yimodeli ene-thermostatKuba, ukuba akunjalo, isezokusebenza njani enye isixhobo? Ngokwesiqhelo iprosesa yintambo eqhagamshelwe kwisixhobo, kunye nomtshini ngokwawo ekugqibeleni, ekufuneka ungene emanzini ukufumana ubushushu.
I-Blau Aquaristic 7776221 -...
Kulabo abangafuni fan enkulu kwaye imbi kukho ezinye ezincinci, zihlala zinobuhle kwaye ziyilelwe ukuyila, ezinoxanduva lokuhlaziya amanzi kwi-aquarium yakho. Ewe ngokunjalo, sebenza kuphela nee-aquariums ukuya kuthi ga kwisixa esithile (jonga kwii-specs zemodeli), kuba zincinci, azisebenzi kakuhle.
Olona hlobo lubalaseleyo lwabalandeli be-aquarium
Kukho Iimpawu ezintathu eziphambili ezikhethekileyo kwiimveliso ze-aquarium kwaye, ngakumbi, kubalandeli kunye neenkqubo zokupholisa.
Intle ye-BOYU FS-55 Aquarium ...
IBoyu yinkampani esekwe eGuangdong (China) enamava angaphezulu kweminyaka engamashumi amabini yoyilo lweemveliso ze-aquarium. Inyaniso, Zinazo zonke iintlobo zeemveliso, ukusuka kubalandeli ukuya kuthi ga kubenzi bamaza, kwaye ke uninzi lwee-aquariums ezahlukeneyo, kunye nefenitshala encinci kunye nayo yonke into ukuyenza ibe nobuhle ngakumbi.
Olu hlobo lweBarcelona aluzange lubonelele nangaphantsi okanye nangaphantsi ukusukela ngo-1996 lusenza ii-aquariums kunye neemveliso eziyilelwe ukuphucula ubomi beentlanzi zethu zifumaneke kubalandeli. Ngokubhekisele kubalandeli, bonisa enye yeendlela ezinamaxabiso aphantsi zokuhlaziya i-aquarium yakho kwintengiso, kunye nezifudumezi, ukuba ufuna iziphumo ezichaseneyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo yeyona nkampani iphambili kunye negama lemveliso ye-aquarium enembali ende, ukusukela oko isiseko sayo sabuyela kwiminyaka yamashumi amathandathu eJamani. Yintoni egqithisile, baneenkqubo ezininzi zokupholisa ezikhoyo, kwaye ayenzelwanga ii-aquariums ezincinci kuphela, kodwa zibonelela ngezisombululo nakwi-aquariums ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-200.
Yintoni ifeni ye-aquarium?
Ubushushu yenye yezona ntshaba zethu zintlanzi, hayi kuba kunzima ukuthwala, kodwa nangenxa yokuba, kubushushu, kukho ioksijini encinci emanzini. Ngasentla, Kwintlanzi inkqubo eguqukayo iyenzeka, kuba ubushushu buyazenza kwaye zibangela imetabolism yazo ukuba ifune ioksijini engakumbi ukuze iphile. Oku kuthetha ukuba xa amanzi eshushu kakhulu, kuyakubanzima ukuphefumla kwentlanzi. Kungenxa yoko le nto ukugcina ubushushu be-aquarium kubaluleke kakhulu, kwaye kutheni sifuna ithemometha kunye nenkqubo yokungenisa umoya elawula ukugcina amanzi kubushushu obufanelekileyo.
Uyikhetha njani ifeni ye-aquarium
Njengoko sibonile ngaphambili, Kukho iintlobo ezininzi zabalandeli ezikhoyoKuya kuxhomekeka kwiimfuno zethu kunye nokukhetha ukukhetha enye okanye enye. Kungenxa yoko le nto silwenzile olu luhlu ngezona zinto zixhaphakileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo xa ukhetha fan ye-aquarium efanelekileyo:
Okokuqala, Eyona nto ibaluleke kakhulu esiza kujonga kuyo bubungakanani be-aquarium. Ngokucacileyo, ii-aquariums ezinkulu ziya kufuna abalandeli ngakumbi, okanye amandla angaphezulu, ukuze bakwazi ukugcina amanzi kubushushu obufanelekileyo. Xa uyokuthenga ifeni, jonga kwinkcazo, uninzi lwabalandeli lubonisa ukuba zingaphi iilitha abanamandla okupholisa.
Inkqubo yokulungisa i inxibelelene ngokusondeleyo nendlela ekulula ngayo ukuba fan idibane kwaye idibanise. Uninzi lwayo lunenkqubo yokuhombisa eqhagamshela phezulu kwi-aquarium ukupholisa phezulu, enye yeendlela ezikhawulezayo nezona zilungileyo zokuphakamisa kunye nokuhlahlela ifeni kwaye uyigcine xa singasayidingi, njengoko kunokwenzeka, kuxhomekeke kwindawo masiphile, siyisebenzisa kuphela ezona nyanga zishushu zonyaka.
Njengoko besitshilo ngaphambili, ingxolo yefeni yinto ekufuneka uyiqwalasele ukuba unayo i-aquarium eofisini okanye kwigumbi lokutyela kwaye awufuni kuphambana. Nangona iimodeli ezilula zihlala zingathethi kakhuluOlukhetho olunomdla kakhulu kukujonga kwimveliso. Kule meko, kuyacetyiswa kakhulu ukubona ukuba abasebenzisi bacinga ntoni ngemveliso, nditsho nokukhangela ividiyo kwiYouTube ukubona ukuba ivakala njani.
Ekugqibeleni, Isantya fan inxulumene amandla. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, kulula ngakumbi ukuthenga iifeni ezintathu kwenye kunesinye esinamandla amakhulu, kuba oku kuya kupholisa amanzi ngokulinganayo, okubaluleke ngakumbi kwiilwandle ezinkulu.
Uyisebenzisa njani ifeni ye-aquarium ngokuchanekileyo
Ukongeza kwi-fan fan, kukho ezinye izinto ezinceda ukugcina ubushushu bamanzi bulungile. Ukufezekisa oku, landela ezi ngcebiso zilandelayo:
Gcina i-aquarium ikude kwimithombo yobushushu ethe ngqo okanye elangeni (Umzekelo, ukuba ikufutshane nefestile, vala amakhethini). Ukuba unako, gcina igumbi le-aquarium lipholile kangangoko kunokwenzeka.
Vula isiciko Ngaphezulu ukuvuselela amanzi. Ukuba kukho imfuneko, hlisa amanqanaba amanzi ngee-intshi ezimbalwa ukuze iintlanzi zakho zingatsiba.
Cima izibane ze-aquarium, okanye ubuncinci ukunciphisa iiyure abakuzo, ukunciphisa imithombo yobushushu.
Faka ifeni ngokulandela imiyalelo yemveliso. Kungcono ukuyibeka ukuze ikwazi ukugubungela amanzi amaninzi phezulu. Kwiindawo ezinkulu zasemanzini, unokufuna ipakethi eneefeni ezininzi ukuvumela amanzi ukuba aphole ngokulinganayo.
Ekugqibeleni, ujonga ithemometha amatyeli aliqela ngemini ukubona ukuba iqondo lobushushu lichanekile na. Ukuba akunjalo, thintela ukupholisa amanzi ngokongeza iityhubhu zomkhenkce okanye utshintsho ngesiquphe kubushushu lunokucinezela iintlanzi zakho.
Umtsalane we-aquarium okanye upholile? Zithini izibonelelo kunye neyantlukwano nganye nganye?
Nangona injongo yakho inye, ifeni kunye nokupholisa ayizizo izixhobo ezifanayo. Eyokuqala ilula kakhulu, kuba iqulethe ifeni okanye ezinye ezininzi ezipholisa amanzi avela ngaphezulu, iimodeli zazo ezintsonkothileyo zikhatshwa yi-thermostat ejika ngokuzenzekelayo okanye icime xa ibona ukuba amanzi awekho kubushushu obufanelekileyo.
Kunoko, ukuphola sisixhobo esimbaxa ngakumbi kwaye sinamandla ngakumbi. Ayigcini ngokugcina i-aquarium yakho kubushushu obulungileyo, ikwanokugcina ubushushu obuvela kwezinye izixhobo ezifakwe kwi-aquarium. Iicooler kukufumana okuhle kwe-aquariums enkulu kakhulu okanye ethe-ethe kakhulu, ewe, zibiza kakhulu kune fan.
Apho ungathenga khona iifeni ze-aquarium ezingabizi kakhulu
Akukho zininzi iindawo apho unokufumana khona abalandeli be-aquariumInyani yile, kuba sisixhobo esithile esihlala sisetyenziselwa iinyanga ezimbalwa zonyaka. A) Ewe:
En Amazon Kulapho uyakufumana ezona ntlobo zibalaseleyo zabalandeli, nangona ngamanye amaxesha umgangatho wazo ushiya into oyifunayo. Ke ngoko, ngakumbi kule meko, sicebisa ukuba ujonge ngononophelo kwizimvo zabanye abasebenzisi, abaya kuba nakho ukukunika imikhondo malunga nokuba imveliso iya kuba luncedo kuwe okanye hayi.
Kwelinye icala, kwi iivenkile ezithengisa izilwanyana Ezizodwa, ezinje ngeKiwoko okanye iTrendenimal, uyakufumana iimodeli ezimbalwa ezikhoyo. Into elungileyo ngezi venkile kukuba ungaya buqu kwaye uyibone ngamehlo, kwaye ubuze umntu evenkileni ukuba unemibuzo.
Umlandeli we-aquarium angasindisa ubomi beentlanzi zakho kwezona nyanga zishushu zonyaka, Ngesixhobo esingathandabuzekiyo esiluncedo kakhulu. Khawusixelele, iintlanzi zakho zihlangabezana njani nobushushu? Ngaba unayo ifeni esebenza ngokukodwa kuwe? Ngaba uyafuna ukwabelana ngengcebiso kunye namathandabuzo akho kunye nabanye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Umtsalane we-Aquarium